” မရှိ မဖြစ် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” မရှိ မဖြစ် “
” မရှိ မဖြစ် “
Posted by black chaw on Oct 21, 2011 in Creative Writing, Think Different | 19 comments
စာရေးဆရာမ ဂျူး ၏ လုံးချင်းဝတ္ထုတစ်အုပ် နာမည်မှာ မရှိမဖြစ် မိုး ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
မရှိမဖြစ် ဟူသော အသုံးအနှုန်းနှင့် ကျွန်တော် သိတ်မရင်းနှီးလှပါ။ သို့သော် ဆရာမ ဂျူး ၏ ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီးချိန်မှစ၍ မရှိမဖြစ်ဆိုသည့် စကားလုံးလေးကို ကျွန်တော် နှစ်ခြိုက်မိပါတော့သည်။ ဆရာမ ဂျူးက ESSENTIAL (မရှိမဖြစ်) ဆိုသောစကားလုံးအပေါ် မင်းသမီးခင်မိုးမြင့်၏ စရိုက်တစ်ခုအဖြစ် စာဖတ်သူကို အသိပေးသွားခဲ့ပါသည်။
“ အလုပ်ထဲဝင်တဲ့အခါ အလုပ်စခန်းတစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်မဟာ မရှိရင် မဖြစ်အောင် တန်ဘိုးရှိဘို့ အမြဲကြိုးစား ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပဲ။ မန္တလေးမှာ ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေ ရှိတယ်။ အဘွားနဲ့ စိတ်ချလက်ချ လွှဲထားရတယ်။ အဲဒီအလုပ်မှာလည်း လူအားလုံးအတွက် ကျွန်မ မရှိရင် မဖြစ်လောက်အောင် လိုအပ်နေဖို့ ကျွန်မ ကြိုးစားခဲ့တာပဲ၊
ကျွန်မသတ်မှတ်ထားတဲ့ လူ့တန်ဘိုးဆိုတာ အဲဒါပဲ ဦးမင်းထင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်မ ကိုလိုအပ်ဘို့ ဆိုတာ ဝေးလွန်းပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအုပ်စု ကွက်ကွက် လေးတွေ အတွက်တော့ ကျွန်မဟာ အမြဲတမ်း အဆင်ရှယ်ဖြစ်နေရမယ်။”
ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးခင်မိုးမြင့် ၏ မာနကဲသော ဒိုင်ယာလောခ် ဖြစ်ပါသည်။
ငယ်ငယ်ကတော့ သူငယ်ချင်းများကြားတွင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုထဲတွင်ဖြစ်ဖြစ် မရှိမဖြစ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မိသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကို ကိုယ်မသိပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင် စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်မိသည်အထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရေးပါချင် နေမိသည်။ တဖြေးဖြေး အရွယ်လေးရလာသောအခါ မရှိမဖြစ် ဆိုသော စကား၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ပုံ ပြောင်းလာခဲ့ ပါသည်။ မရှိမဖြစ် ဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ကြောင်းလည်း နားလည်လာသည်။
ကျောင်းတုန်းက တွဲခဲ့သော သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် သူငယ်ချင်းကောင်လေးတစ်ယောက်တို့ အိမ်ထောင်ကျသောအခါ ဘေးလူတွေ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ချစ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့အိမ်သွားလည်သောအခါ တိုင်းတွင်ကြားရသည်က သူတို့လင်မယားသည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မရှိမဖြစ် ဟူသတတ်။ သိတ်မကြာပါ ယောင်္ကျားလုပ်သူ ၉၆ ပါးရောဂါဖြင့် ဆုံးပါးသွားတော့ မိန်းမလုပ်သူမှာ ငိုလိုက်ရတာ တက်မတတ် ချက်မတတ်။ မနည်းနှာနှပ်ယူရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ငါ့သူငယ်ချင်းတော့ ဆုံးရှာပြီ။ သူ့မိန်းမများ အဆိပ်သောက်ပြီး လိုက်သေရင် အခက် ဟုစိုးရိမ်မိသည် အထိဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်တောင် မကြာပါ၊ ကျန်ရစ်သူ မိန်းမ နောက်ယောင်္ကျား ထပ်ယူသွားပါသည်။ အနှီ နောက်ယောင်္ကျား သည်လည်း သူမ၏ မရှိမဖြစ် ပင် ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ စဉ်းစား ကြည့်တော့ မရှိမဖြစ်ဆိုသည်မှာ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွက် သာဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတုန်းက ပထမယောင်္ကျားသည် သူမအတွက်မရှိမဖြစ် အမှန်ပါ။ သို့သော် နောက်ယောင်္ကျားသည်လည်း ယခုအခါ သူမ၏ မရှိမဖြစ် ပါတည်း။
ကုမ္ပဏီများတွင်လည်း ၀န်ထမ်းတော်တော်များများသည် သူတို့မရှိလျှင် လုပ်ငန်းကြီးလည်ပတ်လို့ မရနိုင်လောက် အောင် ဖြစ်စေချင်ကြပါသည်။ မရှိမဖြစ် ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ချင်ကြခြင်း သာတည်း။ သို့သော် ခေတ်ပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ် များက လူတစ်ယောက်မရှိ၍ အလုပ်ခွင်ကြီးတစ်ခုလုံး ရပ်တန့်သွားရမည့် အဖြစ်မျိုးကို လက်မခံတော့ပါ။ လူတစ်ယောက် ထွက်သွားလျှင် တခြားတစ်ယောက် အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ယာထားနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်ယာ ထားခြင်းကိုပင် လက်ရှိဝန်ထမ်းက သဘောထားကြီးကြီးထားမပေးပဲ ကုမ္ပဏီမှ ထွက်မည်တကဲကဲ လုပ်တတ်ကြသည်ကို တွေ့ဘူးပါသည်။
တရားသဘောအရ ပြောရလျှင်လည်း မည်သည့်အရာမှ မမြဲပါ။ တစ်နေ့ ပျက်ရမည်မှာ မလွဲတည်း။ ထို့ကြောင့် မိမိ ဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုသော လူများကို အမှတ်စဉ်လိုက် ချရေးကြည့်ပါ။ ထိုလူများမရှိလျှင် မိမိတို့ဘ၀ အသက်ဆက်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ သေချာပြီလား။ တွေးကြည့်ပါ။ ဥပမာ- ကျွန်တော်တို့ သိတ်ချစ်သိတ်တန်ဘိုးထားပါသော မိဘနှစ်ပါး သည်ပင် တစ်ချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ နှင့် ခွဲရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မရှိမဖြစ်ဆိုသည်မှာ အချိန်တစ်ခု ကာလတစ်ခု အတွက် လိုအပ်ချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့် မိသားစုအတွက် ကျွန်တော် ဟာ မရှိမဖြစ် ဆိုတာသေချာနေပါပြီလား။
ကျွန်တော်မရှိတော့လျှင်လည်း သူတို့ ရှင်သန်မှု အတွက် ဆက်လက် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေရဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ လောလောဆယ်ရှိနေတုန်း အခိုက် ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက် တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပေးဆပ်ခြင်း ကသာ သူတို့၏ စိတ်ထဲမှ တန်ဘိုးထားခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အသက်ရှင်နေတုန်း အခိုက်အတန့်လေးတွင် မိသားစု အတွက်၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွက် ရပ်ရွာအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ပေးဆပ်နိုင်ခြင်းသည်သာ essential ဆိုသော စကားလုံးနှင့် အနီးကပ်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ထပ်ပြီး HAPPY BIRTHDAY!!! ပါတယ်ဗျာ။
မရှိ မဖြစ် ကို ဒီလိုနားလည်ပြန်တယ်။
လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊ ကိလေသာတွေမရှိတော့ရင်နောက်တဖန် ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။
မိန်းမကသေအောင်ငိုပြီးနောက်မကြာခင်နောက်ယောက်ကျားယူတဲ့ “ယပ်တောင်” ပုံပြင်သိမှာပေါ့နော်။
အားကိုးရတဲ့ ခြံစောင့် မရှိတော့လို့ ..ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့..
Happy Birthday! ခင်ဗျ
ပေါက်ဖော်ရဲ့အဆိုကို ပိုးစိုးပက်စက် ထောက်ခံပါတယ်
ကျုပ်တို့ရဲ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး မရှိတော့ ဘူး ထိမ်းသိမ်းမယ့်အိမ်ထောင်ဦးစီး မရှိတော့
ကျုပ်တို့ပထွေးတွေက အိမ်ကရှိသမျှ ထုတ်ရောင်းစားနေကြပြီ ကြာရင် အခွံပဲကျန်မယ်
တချိန်က တော့ မရှိမဖြစ်ပေါ့လေ.. အခုတော့ မရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ။ .. အခု မရှိမဖြစ် ပေမဲ့ .. တချိန်ကျရင် မ၇ှိလည်းဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှပေ့ါ.. မရှိမဖြစ် ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်..
Happy Birthday ဒုတိယံပိ နော် ကိုဘဘက်ချော..၊
Essential ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အနီးကပ် ဖြစ်အောင် ကျနော်များ ကြိုးစားနေဆဲပါ….။
happy birthday ! brother black
ဘရားသား ဘလက်ဆိုလို့ 
မင်းသိင်္ခရေးတဲ့ စနေမောင်မောင် ထဲ က ဘလက်ဘရားသားစ် မဟုတ်ဘူးနော်
mandalay gazette is essential for me ! ဖြစ်နေပါပြီ ဘရားသားရေ
မနေ့ ညက ဆုတောင်းပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဖိုး အဖွား မိဘတွေ မရှိရင် ဒုက္ခပဲဆိုပြီး တွေးပြီးတောင် စိတ်ဆင်းရဲလို့ ငိုခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အခုတော့ မရှိလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်သွားပြီ …
ရှိနေတုန်း အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးနေရမယ်ဆိုတာကိုလဲ နားလည်သွားပါပြီ …
မရှိမဖြစ်ဆိုတာမှန်လား လို့မေးတော့ နိုးပါလို့ ဖြေလိုက်မိတယ်။
အဲဒီနေ့ညက အဲဒီကောင်မလေး ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားပါတယ်။
“ငါ” မရှိ၇င်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ထင်တစ်လုံးနဲ့လူတွေကိုတွေ့၇င် ပြောလိုက်သင့်တာက သင်းချိုင်းကုန်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလို့။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ မှတ်တိုင်တွေ၊အုတ်ဂူတွေက အမည်လေးတွေကိုဖက်ကြည့်ပါ။ အလွှာအသီးသီးက လူတန်းစာမျိုးစုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘယ်သူ မရှိ၇င်မဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူးဗျာ။
“မွေးနေ့” မှနောင်နှစ်ပေါင်း ၇ာကျော်တိုင်အောင် ဘ၀ကိုအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
ကျွန်တော့် ပို့စ်မှာ ၀င်မန်းပေးကြသူများအားလုံးကို
“လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊ ကိလေသာတွေမရှိတော့ရင်နောက်တဖန် ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။
အတွေးကောင်းကောင်းလေးပါ ကိုသစ်မင်းရေ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ပေါက်ဖေါ်ကြီး နဲ့ ဘီလူးကြီးရေ ကျေးဇူးပါ။
koyinmaung ၊ we R one ၊ oakermg ၊
ကိုပေ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ။
weiwei နဲ့ ကိုပေါက်ကြီးတို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
Tiger mg ရေ။ ဒီလေသံနဲ့ ဒီအသုံးအနှုန်းမျိုးက ကိုပု နဲ့ တော်တော်တူတယ်။
ကျွန်တော်ကခုမှစပြီးမန်းတဲ့ အသစ်တစ်ယောက်ပါဗျာ။ အထင်အမြင်တော့မလွဲလိုက်ပါနဲ့ကိုဘလက်ချောေ၇။ MG ကိုဝင်ပြီဖက်တာဖက်ဖြစ်တာ မမန်းဖူးပါဘူး။ ကိုဘလက်ရဲ့ ပိုစ်လေးကိုဖက်မိပြီး အလုပ်ခွင်ကလူတွေအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားလို့ ၀င်ပြီးမန်းလိုက်တာပါ….
ကိုယ်တိုင်က စာပိုက်၊စာတစ်ပုဒ်ကို ဖြစ်ဖြစ်မြှောက်မြှောက် မေ၇းတတ်လို့ MGမှာဝင်ဖက်၊ ၀င်မန်း နေတာပါ။ MG ကသတင်းတွေစုံသလို၊ အတွေးအမြင်ဗဟုသုတတွေ ပေးနေတဲ့ ရွာလေးတစ်၇ွာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲပဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဘ ဘလက်ချော မိုးစက်နောက်ကျသွားတယ်
“နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး
ကိုနက်ပြောင်စာမှာ မွေးနေ့နဲ့ဆိုင်တာ တခုမှမတွေ့ဘူး။ ကျနော် သုံးခေါက်တိတိ ပြန်ဖတ်ပါတယ်။
ကိုနက်ပြောင် သူငယ်ချင်းမလိုမျိုး တွေ့ဖူးပါသဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာ.. ဘဲရှိတယ်၊ အတူနေခဲ့တယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ ရည်းစားရှိတယ်၊ ဆက်လည်းကြူနေတယ်၊ မြန်မာပြည်မှာ လင်ရှိတယ်၊ သားကြီးသမီးကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့… သစ္စာပျက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ မရှိမဖြစ်လို့ပါတဲ့…။ အမေပေးတဲ့ ယာကွက် ထွန်ယက်ပေးမဲ့ ယာခင်းပိုင်ရှင်မရှိတော့လည်း သူရင်းငှားနဲ့ ထွန်ခိုင်းရတာပေါ့..။ (ကိုယ်စား ပြောပေးတာပါ။ တကယ်တော့လည်း သူတို့ဖာသူတို့ ကိလေသာထတာ ကိုယ်သောက်ပူ မဟုတ်သင့်ဘူးလေ)
အဲဒီ စာအုပ်ကို ကိုယ် ဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကြာပြီ။
အဲဒီ ဇာတ်ကောင် အမျိုးသမီးရဲ့ စရိုက်…ကို ကိုယ် အံ့သြ ခဲ့ရတယ် ။
အိမ်ထောင်ရေးကို သူ မြင်နေပုံက တော်တော်..လက်ဖျားခါလောက်တယ်။
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမ ဟာ ကိုယ့်ကို ကိုယ် အားမကိုးနိုင်လို့အားကိုးရှာ လိုက်တာ..တဲ့။
သူကတော့ ကိုယ် ကိုကိုယ် အားကိုးနိုင်တယ်.. ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မလိုဘူး..တဲ့ ။နောက်ပြီး..အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ..သွေးသားဆန္ဒ sex ကိစ္စ ပေါ့လေ..အဲဒါက ပိုများတယ်။တဲ့ ။
ဘာပဲ..ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ စာအုပ်ကို ကိုယ် သတိရနေပါတယ် ။
ဂျူးရဲ့ စာအုပ်တော်တော်များများက အဲလို အတွေးအခေါ်.လေးတွေ ပါတယ်ဗျ။
အခု တင်ထားတဲ့ ပို့ စ်လေးကိုလည်း ဖတ်ကြည့်တာ ကောင်းပါတယ် ။
မိုးစက် ရေ ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
ကြောင်ကြီး ရေ။ ခင်ဗျားကတော့ တော်တော် ပြောတတ်တယ်။
အလင်းဆက် ရေ။ ဒီစာအုပ်လေးက ပေးတဲ့ အတွေးလေးကို
ချရေးကြည့်တာပါ။ ဆရာမဂျူး နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ အဝေးကြီးမှာပါဗျာ။
အမတ်မင်း နဲ့ aungnng87 ခင်ဗျားနာမည်က ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်းကိုမသိတာနဲ့
“ကျွန်တော့် မိသားစုအတွက် ကျွန်တော် ဟာ မရှိမဖြစ် ဆိုတာသေချာနေပါပြီလား။”
ကိုဘလက်ချောရေ..ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ဒီလို မဖြစ်ရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားတယ်။
ကျွန်တော့် အဖေ ၊ အမေ့ ကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေး .. “မင်းအရင်သွား ရင် ငါဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ ငါအရင်သွားရင် မင်းဒုက္ခ မဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော့် အမေကို အပြင်စီးပွါးရေး အတင်းလုပ်ခိုင်းသလို ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကျောင်းပိတ်တာနဲ့ သူ့အလုပ်ထဲသွတ်သွင်းတော့တာဘဲ.”
ပြောတဲ့ အတိုင်း အဖေ မထင်မှတ်ဘဲ ရုတ်တရက် အရင်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ယိုင်သွားပေမဲ့ မပြိုလဲခဲ့ပါဘူး။ မကြာခင် ပြန်မတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်က “မရှိမဖြစ်” မဖြစ် ရအောင် ကိုယ်ချစ်သူတွေကို ကြိုတင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း ဟာ အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခြင်းပါ။